အခုလို Digital Marketing ခတျေရောကျလာတဲ့အခါမှာ Content ၊ Copy ဆိုတာက လူငယျတိုငျး နှုတျဖြားမှာရပေနျးစားလာပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Content Writing နဲ့ Copy Writing ကို မကှဲကွဘဲ Content လညျး Copy ဖွဈ၊ Copy လညျး Copy ဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Content Writing နဲ့ Copy Writing ဘာကှာလဲ ဆိုတာ ဝမြှေပေးပါ့မယျ။
အခွခေံအကဆြုံးမှတျထားရမယျ့အခကျြကတော့ “ Contents Tell, Copies Sell ” ဆိုတာပါပဲ ။
Contents Writing ဆိုတာက စာရေးသူပွောခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာ၊ အဖွဈအပကျြ တဈခုကို စာဖတျသူ အပွညျ့အဝ ရသှားအောငျ ပေးပို့ပေးတဲ့ ရေးနညျးဖွဈပါတယျ။
Contents က Information ( အခကျြအလကျ ) ကို အရငျးခံပွီး ရေးသားတဲ့ စာရေးခွငျးအနုပညာဖွဈပါတယျ။
Content တဈပုဒျမှာ ခေါငျးစဉျ၊ နိဒါနျး၊စာကိုယျ၊နိဂုံး တို့ ပါဝငျပါတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့အရေးအသားဖွဈပါတယျ။ ဉပမာ - Blogs, Articles, Podcasts တို့ဖွဈပါတယျ။
အဲ့တာကွောငျ့ Contents ကို “A white paper about industry trends “” လို့ သတျမှတျထားနိုငျပါတယျ။
ဥပမာအနနေဲ့ပွောရရငျ - အင်ျဂလိပျစာ တိုးတကျအောငျဘယျလိုနညျးလမျးတှကေို လိုကျနာရမယျဆိုတာမြိုး၊ မိမိကိုယျမိမိ Motivate ဖွဈအောငျ ပွုလုပျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးမြား . . . အစရှိသဖွငျ့ပေါ့။
ဒါဆို Copy Writing ဆိုတာကရော ?
Copy Writing က လကျကမျးစာစောငျလို အရေးအသားမြိုးဖွဈပါတယျ။ ကုနျပစ်စညျးတဈခု အရောငျးထှကျဖို့သျောလညျးကောငျး၊ အရောငျးသှကျဖို့အတှကျသျောလညျးကောငျး ဖနျတီးရတဲ့ အရေးသားတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Copy Writing က ပိုပွီး Persuade လုပျနိုငျဖို့လိုပါတယျ။
Copy Writing က အဆငျ့ ( ၄ ) ဆငျ့ကို ဖွတျသှားအောငျရေးရပါတယျ ။ အဲ့ အဆငျ့ ( ၄ ) ဆငျ့ ကို Customer Journey လို့ ချေါပါတယျ။
( ၁ ) Attention
( ၂ ) Awareness
( ၃ ) Consideration
( ၄ ) Conversion တို့ဖွဈပါတယျ။ ဒီ အဆငျ့ ( ၄ ) ဆငျ့ကို ဖွတျပွီး Customer က သငျ့ Product ကို ဝယျယူလိုကျပွီဆိုရငျ သငျ့ Copy က တနျဖိုးရှိတဲ့ Copy Writing တဈပုဒျလို့ သတျမှတျနိုငျပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ Copy Writing မှာ သငျ သတိထားရမဲ့ အရာ တဈခု ရှိပါတယျ။ အဲ့တာကတော့ Call To Action ( CTA ) ဖွဈပါတယျ။ မပါမဖွဈ Copy တဈပုဒျရဲ့ အသကျသှေးကွောဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Copy တဈပုဒျ ကို “ A landing page about product features ” လို့ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။
ဥပမာ - သငျ့ရဲ့အသားအရညျလှပအောငျ . . . . ပစ်စညျးလေးကို အသုံးပွုကွညျ့ပါနျော။ နောကျတမြိုးက တဈယောကျထဲပဲပြျောအောငျနပေါတယျနျောဆိုတဲ့အရေးအသားမြိုး (ဈေးဗနျးခငျးတာ :P) . . . ဒီလိုအရေးအသားတှဆေိုရငျတော့ Copy Writing လို့ချေါပါတယျ။
ဒီလောကျဆို Content Writing နဲ့ Copy Writing ဘယျလိုကှာလဲ ဆိုတာ သတိပွုမိလောကျပွီထငျပါတယျ။
“ all copy is content, but not all content is copy ”
Content Writing နဲ့ Copy Writing က ဘာကွာလဲ?
အခုလို Digital Marketing ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ Content ၊ Copy ဆိုတာက လူငယ်တိုင်း နှုတ်ဖျားမှာရေပန်းစားလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Content Writing နဲ့ Copy Writing ကို မကွဲကြဘဲ Content လည်း Copy ဖြစ်၊ Copy လည်း Copy ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Content Writing နဲ့ Copy Writing ဘာကွာလဲ ဆိုတာ ဝေမျှပေးပါ့မယ်။
အခြေခံအကျဆုံးမှတ်ထားရမယ့်အချက်ကတော့ “ Contents Tell, Copies Sell ” ဆိုတာပါပဲ ။
Contents Writing ဆိုတာက စာရေးသူပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ၊ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုကို စာဖတ်သူ အပြည့်အဝ ရသွားအောင် ပေးပို့ပေးတဲ့ ရေးနည်းဖြစ်ပါတယ်။
Contents က Information ( အချက်အလက် ) ကို အရင်းခံပြီး ရေးသားတဲ့ စာရေးခြင်းအနုပညာဖြစ်ပါတယ်။
Content တစ်ပုဒ်မှာ ခေါင်းစဉ်၊ နိဒါန်း၊စာကိုယ်၊နိဂုံး တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အရေးအသားဖြစ်ပါတယ်။ ဉပမာ - Blogs, Articles, Podcasts တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့တာကြောင့် Contents ကို “A white paper about industry trends “” လို့ သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် - အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာရမယ်ဆိုတာမျိုး၊ မိမိကိုယ်မိမိ Motivate ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ . . . အစရှိသဖြင့်ပေါ့။
ဒါဆို Copy Writing ဆိုတာကရော ?
Copy Writing က လက်ကမ်းစာစောင်လို အရေးအသားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု အရောင်းထွက်ဖို့သော်လည်းကောင်း၊ အရောင်းသွက်ဖို့အတွက်သော်လည်းကောင်း ဖန်တီးရတဲ့ အရေးသားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Copy Writing က ပိုပြီး Persuade လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
Copy Writing က အဆင့် ( ၄ ) ဆင့်ကို ဖြတ်သွားအောင်ရေးရပါတယ် ။ အဲ့ အဆင့် ( ၄ ) ဆင့် ကို Customer Journey လို့ ခေါ်ပါတယ်။
( ၄ ) Conversion တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အဆင့် ( ၄ ) ဆင့်ကို ဖြတ်ပြီး Customer က သင့် Product ကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီဆိုရင် သင့် Copy က တန်ဖိုးရှိတဲ့ Copy Writing တစ်ပုဒ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ Copy Writing မှာ သင် သတိထားရမဲ့ အရာ တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ Call To Action ( CTA ) ဖြစ်ပါတယ်။ မပါမဖြစ် Copy တစ်ပုဒ်ရဲ့ အသက်သွေးကြောဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Copy တစ်ပုဒ် ကို “ A landing page about product features ” လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ - သင့်ရဲ့အသားအရည်လှပအောင် . . . . ပစ္စည်းလေးကို အသုံးပြုကြည့်ပါနော်။ နောက်တမျိုးက တစ်ယောက်ထဲပဲပျော်အောင်နေပါတယ်နော်ဆိုတဲ့အရေးအသားမျိုး (ဈေးဗန်းခင်းတာ :P) . . . ဒီလိုအရေးအသားတွေဆိုရင်တော့ Copy Writing လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို Content Writing နဲ့ Copy Writing ဘယ်လိုကွာလဲ ဆိုတာ သတိပြုမိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။